Nin Boqor ah ayaa ku riyooday isagoo ilkihiisa oo idil ay ka wada jabayaan, markaasuu u yeertay Nin ku xeel dheer Fasirka Riyooyinka, kiiyoo markii uu yimid ku yiri: Boqoroow ma dhab baa inaad Riyadan aad ii sheeggeyso aragtay? Boqorka wuxuu yiri: Haa waan arkay.
Ninkii Riyo fasire ayaa yiri: Hadaba Boqoroow, waxaan ka xumahay inay Riyadu fasireyso arrin murugo leh. waxayna tahay, in Reerkaaga oo dhami ay adigoo jooga hortaada ku dhiman doonaan!
Boqorkii oo warka Ninku sheegay colaad tii ugu weyneyd qaaday aad uga carooday ayuu Xabsiga dhigay Riyo Fasirihii. Wuxuuna mar kale u yeertay Nin bal midkan ka duwanaada oo Riyada si kale u fasira, kii loo keenayna isla sidii midkii hore buu wax u sheegay waana la xiray, illaa Dhowr Nin kale ay sidaas oo kale noqdaan.
Ugu dambeyntii Nin buu Boqorku u yeertay oo yiri: bal adna Riyadan fasir. Kiina markuu Boqorka ku celceliyay oo ku adkeeyay inuu Riyada sida ay tahay u arkay, Boqorkuna Haa un ku jawaabay. Ayuu yiri: Boqoroow aad baan kuugu hambaliyeynayaa!
Boqorkii oo yaaban ayaa yiri: Maxaa dhacay ood igu hambaliyeeyn?
Ninkii ayaa yiri: Riyadu waxay sheegeysaa, in Adiga aad ugu Cimri dheeraanayso dhamaan Ehelkaaga!
Boqorkii aad buu u farxay, Ninkiina wuu Abaal mariyay waliba si heer sareysa.
Hadaba xikmadu maxay tahay: halkan waxaa laga arki karayaa, in luuqada Hadalka isagoo isku micno ah, hadana sida loo kala dhigayo iyo Qofba Qaabka uu u sheegayo lagu kala duwanaanayo. Waxaa marka haboon inaad had iyo goor ka fiirsato sida aad u hadleyso, ka hor inta aadan Dhawaaqin!
Waxaa la yiri: Hadal waa Margi oo kale, Oo hadba meel u jiidma.
Hits : 12751